Waa imisa tirada duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya ? – Idil News
Waa imisa tirada duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya ?
Talisk Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa shaaciyay tirada rasmi ah ee duqeymaha diyaaradeed ay sanadkaan 2020 ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika uu sheegay in saddex weerar oo dhinaca Cirka ay Al-shabaab la beegsadeen inta u dhexeeysay bilowga bishaan Agoosto iyo 20-keedii.
Ugu dambeyn Taliska AFRICOM Qoraalka ay soo saareen kuma aysan shaacin Khasaaraha dadka shacabka ah kasoo gaaray duqeymaha ay sanadkaan ka geysteen Soomaaliya, in kastoo ay jiraan khasaare dadka shacab ah kasoo gaaray duqeymahaas.
Ciidanka Kumaandoosta Danab iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee duuliye la’aanta ayaa duqeymo kala duwan inta badan ka fuliya deegaanada Gobolada dalka ay kaga sugan yihiin Al-shabaab.